1. Voanjo sy akoho
Akoho gasy ihany no tena tsara ka andrahoina halemy tsara sy hakàna rony aloha vao endasina ny nofony ary hatao saosy miaraka amin’ny voanjo efa voatoto.
2. Biskoitra amin’ny voanjo
Totoina tena halemy ny voanjo. Ireny efa mitera-menaka ireny mihitsy izy no tsara. Afangaro amin’ny lafarinina efa nasiana leviora kely ary dibera io voanjo io dia volaina ho biskoitra ary andrahoina amin’ny lafaoro
3. Mousse amin’ny voanjo
Voanjo efa voatoto ihany no ampiasaina eto fa tsy ilay potsitra be kosa. Mbola ilay misy karepohina iny dia afangaro amin’ny krema “chantilly” efa nokapohina niaraka tamin’ny siramamy mena.
4. Saosy voanjo
Isan’ny be mpankafy ny saosy voanjo, rehefa tena tsara karakara. Totoina mba halemy ny voanjo fa tsy asiana mivaingana be loatra. Endasina aloha ny voatabia sy tongolo. Afangaro miaraka aminy ao ny voanjo ampiana saosy soja kely, tantely, menaka sesame sy saosy sakay